Seychelles Tourism Board dia mikarakara fitsangantsanganana an-tsambo any La Réunion
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Seychelles Tourism Board dia mikarakara fitsangantsanganana an-tsambo any La Réunion
Ny Seychelles Tourism Board (STB) dia nikarakara hetsika tany an-dranomasina ho an'ny varotra fitsangatsanganana any La Réunion mba hanatsarana sy hizaha ny fahalalan'ny mpandray anjara momba ny paradisa nosy Seychelles, izay teo ambanin'ny tontolo mahafinaritra sy milamina nefa mbola miasa. Fotoana mety nanombohan'ny STB hanehoana fankasitrahana ireo matihanina mpivarotra amin'ny dia noho ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny fivarotana Seychelles.
Nantsoina hoe 'Apero Sunset avy amin'i Seychelles', matihanina amin'ny varotra Reunion 40 mahery niaraka tamin'ny STB tamin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina nandritra ny adiny roa mba hiaina ny toerana alehany. Natao izany tamin'ny fanandramana ireo matihanina hanandrana ny sakafon'ny Creole Seychelles sy ireo dihy nentim-paharazana.
Tamin'izany no nanesorana ireo manam-pahaizana momba ny varotra dia lavitra ny toeram-piasan'izy ireo ary napetraka tao amin'ny iray amin'ireo Catamaran malaza indrindra ao amin'ny faritra, "Maloya".
Ny foto-kevitra vaovao, nokarakaraina tamin'ny 24 Oktobra voalohany, dia mifanaraka amin'ny hetsika ara-barotra STB ao La Réunion mba hametrahana an'i Seychelles ao an-tampon'ny sain'ny matihanina mpivarotra dia. Tamin'ny alàlan'ny Quiz interactive Buzzer, ny fahalalan'ireo manam-pahaizana dia nosedraina tamin'ny lohahevitra samihafa momba ilay toerana haleha.
Ny Lehiben'ny Executive STB, Ramatoa Sherin Francis, dia nanatrika ity hetsika ity, izay ampahany amin'ny iraka ofisialy nataony tany La Réunion nanomboka ny 21 Oktobra 2018 hatramin'ny 25 Oktobra 2018. Niaraka taminy Rtoa Bernadette Honore, Senior Executive Executive izay monina ao La Reunion.
Ny hetsika tao amin'ny sambo "Maloya" dia nanolotra an-dRamatoa Francis fotoana hihaonana amin'ireo matihanina momba ny varotra dia ary nanitatra ny fankasitrahany ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny fivarotana Seychelles.
Tamin'ny kabary fanokafana nataony dia nilaza Ramatoa Francis fa ny tsenan'ny Réunion dia ampahany lehibe amin'ny tetikadin'ny fizahan-tany Seychelles, izay ny fanohanana hatrany ireo orinasa kely sy salantsalany, ny ankamaroany dia tanindrazana ary fananan'i Seychellois.
"Ny fitomboan'ny tsenanay dia noho ny fanoloran-tenanao sy ny ezaka nataonao izay nidera ny ankamaroan'ny asa nataontsika. Ny finoanao sy ny finoanao no nahafahanay nanao izay hahitana an'i Seychelles misimisy kokoa eo amin'ny tsenan'i La Réunion, "hoy Ramatoa Francis.
Notohizan'ny tale jeneraly tamin'ny alàlan'ny fanolorana ny asa tsara nataon'ny biraon'ny STB tany Reunion. Nilaza izy fa mirehareha amin'ny orinasa ny fanapahan-kevitra hametraka solontenan'ny STB ao La Réunion. Rtoa Bernadette Honore, izay teo koa tamin'io hetsika io, dia notendrena ho solontenan'ny STB any La Réunion tamin'ny 2015.
“Nanamboatra fifandraisana vaovao maro izahay ary lasa akaiky kokoa. Azontsika atao ny milaza fa mahafantatra sy mahatakatra tsara kokoa ny tsena sy ny vahoaka isika, mamela antsika hanao hetsika maro hafa izay tsy noeritreretina talohan'ny nahatongavanay teto, "hoy Ramatoa Francis.
Seychelles dia vavahady fialan-tsasatra mahafinaritra ho an'ny Réunionese ary tsy azo ampitahaina amin'ny toeran-kafa nosy. Ny fomba mahafinaritra hahitana an'i Seychelles dia hita fa fahombiazana teo amin'ireo mpivarotra dia izay naneho ny fahafaham-pony tamim-pahatsorana nandritra ny hetsika.
Amin'ny anarany, Ramatoa Honore dia nilaza fa ny fampidirana an'ity foto-kevitra momba ny fahalalana an'i Seychelles ity amin'ny fomba mahafinaritra dia iray amin'ireo foto-kevitra vaovao hatolotr'i STB an'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny dia any La Réunion.
"Ny fivoahana miaraka amin'ireto foto-kevitra vaovao ireto dia tsy fomba tokana ahafahantsika manavaka ny hetsika marketing hafa efa napetraky ny biraon'ny fizahan-tany hafa eny an-tsena, fa ny hijanonan'i Seychelles hatrany an-tampon'ny sahan'ireo matihanina amin'ny varotra dia lavitra eto La Réunion.
Nanampy izy fa ireo olona ireo dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fivarotana sy ny fanolorana ny toerana alehan'ny mpanjifany.
"Ny vavan'ny vava dia fitaovana marketing matanjaka ary ny fananana ny agents miaina ity hetsika ity ary ny firesahana tsy tapaka momba izany dia fomba tsara hitehirizany ny tanjona hatrany," hoy Ramatoa Honore.
Nandritra ny hetsika dia nanome tapakila roa tamin'ny zotram-piangonana Reunion-Seychelles i Air Austral mpiara-miasa amin'ny zotram-piaramanidina Nisy ny fisarihana natao teo amin'ireo matihanina momba ny varotra Reunion Travel.
Ilay mpandresy lehibe, solontenan'ny Transcontient dia nandeha niaraka tamin'ny loka natolotry Brigitte Ravilly solontenan'ny Air Austral sy ny Lehiben'ny Executive STB Ramatoa Francis.
Toerana jamba mametra ny fahafahan'ny fizahan-tany any Karaiba
Ny fizahan-tany ao Jamaika dia mamaritra ny daty hanohizana ny hetsika Jet Ski